Sida loo xiro khariidada Google Earth - Geofumadas
Nofeembar, 2007 ArcGIS-ESRI, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley, dalwaddii Earth
Waxaa jira barnaamijyo kala duwan si ay u soo bandhigaan oo isku dubaridi maps, oo ay ku jiraan ArcGIS (ArcMap, ArcView), kala cayncayn ah, Cadcorp, AutoCAD, Microstation, heerka GIS, ka hor inta aan arkay sida qaar ka mid ah waxay qaataan faa'iidoâ € |
Xaaladdan waxaan arki doonaa sida loo xariiro kala cayncayn ah Adeegyada sawirada, tani waxay sidoo kale tahay hab lagu soo dejiyo sawir si loogu kaydiyo.
Post kale ayaan ku hadlaa sida la sameeyo ArcGis
1. Kala iibso dukaamada
Ugu horreyntii, haddii aanan sameynin, waa in aan soo rogno araajida server-ka, laga bilaabo aagga dheecaanka sababtoo ah inta badan ma imaanayaan liisanka.
64bitImageServers.exe (111 KB) - loogu talagalay 64 qaybaha yaryar.
ImageServersPack.zip (16 KB) - ee loogu talagalay noocyada xirmooyinka 32. Labadoodaba waxay hayaan faylasha lagama maarmaanka ah .dll si loogu xiro Microsoft Virtual Earth, jidadka Yahoo / khariidadaha iyo Google Earth / khariidadaha. Mar haddii la soo dejisto, waa in lagu meeleeyaa "faylalka barnaamijka / nidaamka kaladuwan /" galka. Qalabkan, sida laga soo xigtay saaxiibbada Manifold, ma ahan kuwo iyaga u gaar ah laakiin waa Georeference.org, bulshada ay ku soo koreen; Waqti dheeri ah ayaa la sheegay in aaladuhu shaqeynayaan, laakiin in Google uu ugaarsaday inuu diido helitaanka; Waxaan ku talinayaa in tan layska ilaaliyo bulshada.2. Isku xidhiidh IMS-da
Ugu horreyn waxaan fureynaa khariidadda ama qaybta, waxaanan u guuraynaa aag aan rabno in aan sineyno (waxaad ku dari kartaa isku-duwayaasha, hase yeeshee sida ugu habboon ee sidan ah)
Mar alla markaynu kujirayno goob dana danteena ah, waxaan xulanaa «faylka / isku xirka / sawirka» waxaanna dooranaa 'adeegayaal muuqaal badan'
Daaqadu waxay noo ogolaanaysaa in aan kala doorano khariidadaha Google / qaababka dayax-gacmeedka, khariidadaha Google / wadada, Virtual Earth / satellite-ka, Khariidadaha Dunida ee Virtual / waddada iyo khariidadaha Yahoo / wadada. Kiiskeena waxaan dooran doonaa khariidadaha Google / sawirka satalaytka.
Haddii aad haysato ruqsad lacag ah Google Earth (Pro ama Enterprise) waxaad dooran kartaa url si xal loo helo, haddii kale, waxaan ka tagnaa midka ku soo baxa mid aan caadi ahayn.
Berrinka "iskeelka", waxaan ku dooranaa cabirka aan ku rabno pixels, kaas oo u dhexeeyo mitirka 1 illaa 160 km. Way iska cadahay in u dhaw dhaw howl galka inuu yahay xalka sawirka.
Si nidaamka loo qabsado xaddiga (loo dirayo) waxaan heysanaa, waxaan ku dhufanaa badhanka furan.
Haddii aan rabno in kayd ciidamo kala cayncayn ah waa in ay sameeyaan in doorasho iyo wakiil button waxaa loogu talagalay macar our aabooyinka waa in ay leeyihiin.
Kadib waxaan dhajinaynaa badhanka "ok"
Meelaha qaybta ka ah waxaad arki kartaa natiijada.
2. Kala saarista qiyaasta adeegga sawirka
Arrinta Google Earth, soo-dejintu waxay la imaanaysaa saadaal cylindrical Standard UTM (Mercator) oo leh websaydhka WGS84. Waa lagama maarmaan in lagu meeleeyo saadaashaas, oo leh badhanka saxda ah «ku wareeji»
Arrinka "meeleynta ama beddelaadda" saadaalinta waa waxoogaa xanuun ah, marka waxaa ugu wanaagsan inaadan isticmaalin isbeddel.
3. Muujinaya IMS khariidada
Tan darteed, waxaan u jiideynaa oo kaliya a "khariidad", sida walxaha kale, oo ah isku ekaanshaha lakabka arcmap, si aan u aragno gadaasha khariidadaha waxaa lagama maarmaan ah in lagu jiido tabannada hoose, gadaasha midka aan rabno, oo aan u xilsaarinno daahfurnaan khariiddada ka soo horjeedda.
4. Badbaadi sawirka juqraafi ah
Tan darteed, kaliya si sax ah uxir qaybta, iyo dhoofinta, waxaa lagu keydin karaa qaabab kala duwan, waxaa lagu taliyay .ecw compact-ka. Si aad u soo qaadato sawirka, "soo dejinta / muuqaalka" ayaa la sameeyaa ka dib marka la keeno, waa inaad had iyo jeer u qoondeysaa saadaalinta. Ha ilaawin inaad ku meelayso saadaasha hore ee Google (heerka, meeraha silsilajka wgs84), hada waad badali kartaa saadaasha si aad u dhadhamiso, tusaale ahaan UTM zone North 16, wgs84
Si tan loo sameeyo: guji midigta ku dhaji shayga kor ku xusan oo guduud ka dhig “Cudur-kululaha guud ee qulqulaha / aagga 16N / Datum wgs84” oo kiiskan yahay aagga Honduras.
... isha, tani waa hab kale oo ah sawirro la duubay sawirrada ... iyadoo aan la dagaallamaynin xumaanta sida lagu muujiyey boosteejo kale Microstation ama leh AutoCAD.
Inaad ku xirto ArcGis Google / Virtual Earth arag halkan
Post Previous«Previous Pro in images GoogleEarth leeyihiin xal ka wanaagsan?
Post Next Jawaabaha gaaban ee ku saabsan MicrostationNext »
5 Jawaab in "Sida loo xiro khariidada Google Earth"
anto isagu wuxuu leeyahay:
sida ay ugu xiran tahay goolka
Waxaan wax ku aqriyay madasha 'Manifold', sida muuqata Google wuxuu beddelay habka macluumaadka loo adeegsado sidaas darteed waxay umuuqataa in uusan qofna xiriiri karin. Dadka Manifold ma aysan hubin goorta ay sameyn doonaan nooc cusub oo isku xiraha kaas oo ah habka aan aheyn Manifold balse uu ka yimid Georeference.org
Anigu waxaan leeyahay Manifold 8 waa qalab weyn, laakiin ma xirmi karo Google Earth, waxaan raacaa talaabooyinka oo dhan laakiin waxay diideysaa in aan helo. Sideen u xalin karaa dhibaatada?
Waa hagaag, maaha inaan ogaado ...
Hambalyo! Aad u fiican blog-kaaga. Anigu waxaan dhawaan helay iyada oo u mahadnaqaysa akhristaha.
Su'aashaydu waxay tahay haddii ay jirto dll oo ku xiran sawirrada dayax-gacmeedka Yahoo.
Waxaan haynaa Google Earth, WE Maps, laakiin xaalado gaar ah, satellite-ka Yahoo waxay leedahay muuqaalo qoto-dheer oo ah GE-ga hooseeya. Taasi waa sababta aan su'aalahayga u baahanahay inaan u xirto Yahoo satellite.
Thanks and go! MACLUUMAAD DHEERAAD AH oo ku saabsan Manifold waa loo baahan yahay. Waxay fiicnaan laheyd inaad ku samayso barashooyin yaryar oo mawduucyo sahlan oo mawduucyo ah oo loogu talagalay isticmaalaha tababarka (sida aniga oo kale). Mahadsanid!